अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेतामा राजनेता हो : सिन्धु (जलेसा) बुढाथोकी – Deurali News
८ मंसिर २०७८, बुधबार १८:१४ November 24, 2021
Posted By: Deurali News0Comment सिन्धु (जलेसा) बुढाथोकी
राजनीतिसँगै कला, साहित्य र सिर्जना एकसाथ डो-याउन सफल महिला नेतृ हुन् सिन्धु जलेसा बुढाथोकी । अर्धाखाँचीमा जन्मिएकी सिन्धुको बसोबास भने नवलपरासीमा छ । संविधानसभा सदस्य हुनभ्याइसकेकी सिन्धु सधैं पार्टी र जनताको हितप्रति दत्तचित्त भएर लाग्ने इमान्दार नेतृ र स्पष्ठ वक्ताको रुपमा चिनिन्छिन् । उनी सकारात्मक सोच नै सफलताको कडी ठान्दछिन् । अनेरास्ववियुबाट पार्टी राजनीतिमा उदाएकी उनलाई पार्टीभित्र स्थापित भएको पत्तैथिएन । देश, जनता र पार्टीलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिमा होमिएकी सिन्धुसँग नेकपा एमालेको १० महाधिवेशनमा केन्द्रित रहेर कालिका महतले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
मैले नेपाली र सोसोलजी गरी दुईवटा विषयमा मास्टर्स डिग्री गरेकी छु। अहिले पीएडीको लागि पनि तयारी गर्दैछु।
मलाई त कदर हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ। आफूप्रति नै विश्वास नभएको मान्छेले मात्रै मलाई अरुले गरेन, हेरेन भनेर अलोचना गर्ने, चिढिने काम गर्दछन् । म चाहिं त्यसमा विश्वास गर्दिँन “आफू भलो त जगतै भलो” भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ । हामीले जुनसुकै काम गर्दापनि सधैं सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ। त्यसको रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ।
पार्टीको आसन्न १० औं महाधिवेशनमा सबै हिसाबले अब मेरो पनि बेला भयो कि भनेर केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा तयारी गर्दै छु।
अहिले नेकपा एमालेभित्र कुनै पक्ष, विपक्ष प्यालन बनाइएको छैन। १० महाधिवेशनमा नेकपा एमाले कुनै नेता लक्षित पक्ष, विपक्ष अथवा प्यानल बनाएर आन्तरिक चुनावमा गएको छैन। सबैले आफ्नै बलबुताले चुनाव लड्ने हो। प्यानलमा परिन्छ, चुनाव जितिन्छ भन्ने छैन। यसपालिको महाधिवेशनमा नेकपा माएलेले कसैको प्यानलको लिस्ट बनाउने काम गर्दैन।
नेकपा एमालेले एकदमै ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको छ। कुनै नेताको नाममा प्यानल, लिस्ट बन्नेवाला छैन। आफ्नो स्वतन्त्रता अनुसार चुनाव लड्ने हो । यो एकताको महाधिवेशन भएकाले कुनै प्यानल नबनाइकन चुनाव हुन्छ। अहिले जसरी पार्टीहरुमा गुटउपगुट देखिएका छन्। नेकपा एमालेले यसपालि गुटको बाउन्ड्रिलाई तोडेर देखाउँछ।
हो, यो १० औं महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको वृहत एकता महाधिवशेन हुने छ। जसले पार्टीलाई, सुदृढ, संगठित, एकताबद्ध र उदीयमान बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैअनुरुप महाधिवेशन अगाडि बढ्छ।
नेकपा एमाले १० औं महाधिवेशनले झन् एकढिक्का हुन सुझाउँछ हो ?
हो, १० औं महाधिवेशनले पार्टीलाई अझ सुदृढ, सुसंगठित, एकढिक्का बनाएर नेता, कार्यकर्ता र जनताबीच उत्साह जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने छ। गाउँगाउँ, बस्तीबस्ती, टोलटोलबाट नेकपा एमालेप्रति जनताहरु जुर्मुराएका छन् । चितवनको नारायणी किनारमा हुन गइरहेको महाधिवेशनमा आउनको लागि नेता, कार्यकर्ता र जनताहरु एकदमै उत्साहित देखिएका छन् । पार्टीलाई अझ बलियो बनाउन सबै नेता, कार्यकर्ता र सर्मथित जनताहरु दत्तचित्त भएर लागेका छन् ।
नवलपरासी जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएकी हुँ।
यो महाधिवेशनमा नेताको होइन पार्टीको साझा उम्मेदवार हुन्छन् । यो महाधिवेशनमा जसले नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधिलाई प्रभाव पार्छन्, उनीहरुले चुनाव जित्छन् । गुटको बलमा चुनाव जित्छु भनेर कसैले नसोचे हुन्छ ।
अहिलेसम्म ७३ जिल्लामा सर्वसम्मत स्थानीय, प्रदेश, क्षेत्रीयदेखि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुसम्म सर्वसम्मत ढंगले चयन भएर आउनुभएको छ। अरु बाँकी जिल्लाहरुमा एकदमै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचनमार्फत आउनुभएको छ।
म केन्द्रीय कमिटि सदस्यको उम्मेदवार भइरहँदा तपाईहरुले मलाई भोट दिएर जिताउनुभयो भने पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्त अनुसार दत्तचित्त भएर काम गर्ने छु । देश र जनताको हितको लागि मरिमेटेर काम गर्ने छु विकास निर्माण र समृद्धिमा एउटा इँटा थप्ने आधारसिला तयार गर्ने छु।
मलाई केन्द्रीय कमिटिमा पु-याउनुभयो भने नेता, कार्यकर्ता र जनताको चाहना अनुसार दिलो ज्यान दिएर काम गर्ने छु । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सुझाव, सल्लाह दिन सधैं दत्तचित्त भएर लाग्ने छु । पार्टीभित्र शीर्ष नेताबीच कार्यकर्ता, जनताको गुनासाहरु पु-याउन पुल काम गर्न अग्रसर हुनेछु।
म बाल्यकालदेखि नै पार्टीहितमा काम गर्दै आएकी हुँ। पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रीमा पार्टीहितको लागि मैले दिलो ज्यान दिएर काम गरेकी थिएँ। त्यसैले पार्टीहितको लागि आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म काम गर्ने छु। अर्को मलाई नेकपा एमालेका धेरै कार्यकर्ताले मलाई प्रतिनिधि छनोट गरेर पठाउनुभएको छ। जसले भोट दिएर तँ केन्द्रीय कमिटिमा जा भनेर जसले मलाई पठाउनुभएको छ उहाँहरु नै आधार हुनुहुन्छ। ती भोटर कार्यकर्ता मेरा मूल आधार हुन्। त्यसपछि पार्टीमा जनहितमा राम्रो भूमिका खेल्ने काम मेरो हो।
मेरो हिसाबले भन्नुपर्दा दर्बिलो आकांक्षी हुँ । देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरुले के मूल्यांकन गर्नुहुन्छ। मेरोतर्फबाट म केन्द्रीय कमिटि सदस्यको आकांक्षी हुँ। उहाँहरुले कस्तो मूल्यांकन गर्नुहुन्छ त्यो समयले बताउने छ। मैले संविधानसभा सभाषद भइसकेको मान्छे हुँ। त्यसपनि मलाई धेरै अनुभव भएको छ।
सरकारमा हुँदा र नहुँदा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे गर्नुभएको छ, त्यो राम्राको लागि गर्नुभएको छ। देश र जनताको हितमा काम गर्नुभएको भएको छ। सत्तामा हुना केपी ओलीले धेरै राम्रा काम गर्नुभएको हो। उहाँका पालनामा धेरै राम्रा काम भएका छन्। उहाँले विकास निर्माणका कामलाई देशका कुनाकाप्चासम्म पु-याउनुभएको छ। सुरुङमार्ग, विभिन्न सडक विस्तार, रेल, बाटोघाटो, पुलपुलेसा उहाँकै पालामा सम्पन्न भएका छन्।
‘म बनाउ छु, मेरो धरहरा’ भनेर उहाँले बनाउनुभयो। रानीपोखरी उहाँकै पालामा सम्पन्न भयो । भैरहवा एयरपोर्ट उहाँकै पालमा बनेको छ । विभिन्न आयोगहरुमा नियुक्ति गर्न नदिएर उहाँलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरियो । त्यसलाई चिरेर उहाँले काम गर्नुभयो। त्यसैले केपी ओली एकदमै काम गर्नखोज्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरेर काम गर्न नदिइएको सत्य हो। उहाँ आफैमा नराम्रो मान्छे होइन।
चुच्चे नक्सा, रामको जन्म स्थानको उत्खनन्, सगरमाथाको नयाँ उचाईंलगायत थुप्रै राम्रो, ऐतिहासिक र दीर्घकालीन योजना उहाँले ल्याउनुभयो। लिम्पियाधुराको नयाँ नक्सा ल्याएर अहिलेसम्म कसै गर्न नसकेको काम गर्नुभयो । त्यसकारण केपी त यो देशको राजनेता हो। म उहाँलाई अहिलेसम्मका नेतामा राजनेता भन्न रुचाउँछु।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एदमै राम्रो नेता हो। उहाँले आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म देश, जनता र पार्टी हितमा काम गर्नुभएको हो। बरु केही व्यक्तिहरुले उहाँले गरेका राम्रा काम देख्न नसकेर केही व्यक्तिहरुले झुठा, आरोप, प्रत्यारोप गरेका हुन्। उहाँले नराम्रो गर्नूभएको छैन । सकेसम्म राष्ट्रहितमा दिलो ज्यान दिएर काम गर्नुभएको हो। छोटो अवधिमा विभिन्न अवरोधलाई चिरेर धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ।
नेकपा एमाले फुटेको होइन । एउटा सानो चोइटो, चोइटेएर उछिट्टिएको मात्रै हो । केपी ओलीले गरेका राम्रा काम देख्न नसकेर असन्तुष्ट व्यक्तिहरु चोटिएका हुन् । त्यो चोइटाले सिंगो मुढालाई एकरत्ति असर गर्दैन।
यो चोइटाले राष्ट्रिय निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई केही असर गर्दैन। आगामी निर्वाचनमा अरु पार्टीको पञ्च गठबन्धन भएपनि नेकपा एमाले एक्लै लडेर बहुमत ल्याउँछ । चुइटिनेहरुले एमालेलाई निर्वाचनमा असर गर्छ भन्ने जुन आँकलन गरेका छन् । त्यसले केही असर गर्दैन । देशभरका नेता, कार्यकर्ता र जनताले घरघर, टोलटोलबाट नेकपा एमालेलाई सहयोग गरेर एउटा दर्बिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गर्ने छन्।
माओवादी निस्किएर गयो त्यसले एमालेलाई ध्वस्त पार्छ भन्नेहरु पनि छन् नि?
माओवादी निस्किएर जाँदैमा नेकपा एमालेको सुदृढ, संगठित जुन एकमना एकता जुन छ त्यसमा कुनै हानीनोक्सानी भएको छैन। नेकपा एमालेको संगठनलाई कुनै शक्तिले ध्वस्त पार्ने प्रश्नै आउँदैन। त्यसमा रमाउँदा कसैलाई आनन्द आउँछ भने मेरो केही भन्नु छैन। एमालेको संगठन हिजो जुन ठाउँमा थियो आजपनि त्यहीं ठाउँमा छ । कुनै तलमाथि परेको छैन। हामी पहिलाको भन्दा अझ सुदृढ, संगठित र समृद्ध भएर अगाडि जाने छौं।
हो, १० महाधिवेशनले सुदृढ, एकमना एकताको पार्टी, देश र जनताको पार्टी, राष्ट्रको हित गर्ने पार्टी, विकास निर्माण र समृढि ल्याउने पार्टी, एकताको सुत्र बाध्ने पार्टीको रुपमा स्थापित गर्दछ।
म बाल्यकादेखि यहाँसम्म पार्टीहितको लागि काम गर्दै आएँ । पञ्चायती व्यवस्थाको कालरात्रीमा पनि आफ्नो दिलो ज्यान दिएर पार्टीको लागि काम गरेकी छु। नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले धेरै माया गरेर प्रतिनिधि पठाउनुभएको छ। मलाई नवलपरासीका कार्यकर्ताले तपाईं केन्द्रीय कमिटिमा जानु भनेर प्रतिनिधि पठाइसकेपछि उहाँहरु नै मेरा मूख्य आधार हुन्। जसले भोट दिएर केन्द्रीय कमिटिमा जाने ढोका खोलिदिनुभयो उहाँहरु मेरो आधारस्तम्भ हो ।
पार्टीका विभिन्न जनवर्गीय संगठनहरुमा रहेर काम पनि गरेकी छु। जनजाति महासंघ, महिला संगठन, जनसांस्कृति संघलगायतका ठाउँमा काम गरेको हुँदा ती पनि मेरो आधार हुन्। अब मैले त्यहाँ गएर कार्यकर्ता, प्रतिनिधिहरुको इच्छा, आकांक्षा र भरोसा अनुसार काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रतिनिधि साथीहरुले मलाई केन्द्रीय कमिटिमा जान सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु।
म कम्मर कसेर चुनावी मैदानमा होमिन्छु। मलाई हिजो कार्यकर्ताहरुले चुनेर यहाँसम्म पठाउनुभयो। उहाँहरुको भोटको सम्मान गरेर म केन्द्रीय कमिटि सदस्यको उम्मेदावर बन्छु। त्यसपछि प्रतिनिधि कमरेडहरुले मलाई भोट हाल्नुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु। हिजो संविधान निर्माणमा सहभागी हुने अवसर पनि मलाई पार्टी र नेता कार्यकर्ताले दिनुभयो। त्यसले राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेटवर्क विस्तार भयो। अब आज केन्द्रीय कमिटिमा पु-याउन सहयोग गर्नुभयो भने म पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने छु।
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ०५:४२ Deurali News 0
८ आश्विन २०७७, बिहीबार ०२:४५ Deurali News 0
सुचना आयुक्त ओलीले गरिन अछाम र बाजुरा भ्रमण
२२ कार्तिक २०७७, शनिबार ०२:४९ Deurali News 0